मोदीलाई टक्कर दिईरहेका कन्हैयाकुमार को हुन् ? यस्तो छ उनको पृष्ठभुमि | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
मोदीलाई टक्कर दिईरहेका कन्हैयाकुमार को हुन् ? यस्तो छ उनको पृष्ठभुमि
चैत २६ गते, २०७५ - ०९:४२
जेएनयुबाट पिएचडी गरेका कन्हैयाकुमारको घरको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । उनको पारिवारिक अवस्था समेत आर्थिक रुपमा अति विपन्न रहेको भारतीय मिडियाहरुले बताउने गरेका छन् । तर उनले एउटा राम्रो जागिरको खोजी नगरी निष्ठाको कम्युनिष्ट राजनीतिमा होमिएका छन् ।
काठमाडौं । भारतमा बिहीबारदेखि हुन गइरहेको लोकसभा चुनावको सरगर्मी बढेको छ । मुख्य प्रतिस्पर्धा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र कांग्रेस आईबीच नै हुने भएता पनि अन्य दलका पनि केही उम्मेदवार निकै चर्चामा छन्, जसमध्येका एक हुन् बिहारका कम्युनिष्ट उम्मदेवार– कन्हैया कुमार ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हैरान बनाईरहेका जेएनयुका विद्यार्थी कन्हैयाकुमार फेरी एकपटक चर्चाको केन्द्रमा छन् ।
भारतमा विहिबारबाट हुने लोकसभाको चुनावमा विहारबाट एनडीएका उम्मेदवार गिरिराज सिंहसँग चुनावी प्रतिष्पर्धी बनेपछि झन चर्चा चुलिएको हो ।
गिरिराज र कन्हैयाकुमार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीका कट्टर समर्थक र कटु विरोधी समेत हुन् । गिरिराज अति हिन्दुवादीका रुपमा मात्रै चिनिदैनन् गैरहिन्दुहरुलाई देश निकालाको माग गर्छन् भने कन्हैयाकुमार धर्मविरोधी मात्रै होइनन् मोदीको सत्तालाई फाँसिवादी सत्ता ठान्छन् ।
मोदीको सत्ताले कन्हैयाकुमारलाई देशद्रोहको आरोप लगाएको भएपनि भारतिय कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिआई) बाट विहारको बगुसरायमा उम्मेदवार बनाएको छ । कन्हैया कुमार यतिबेला भाजपा सरकारको साम्प्रदायिक राजनीतिबाट पीडित अल्पसंख्यक भारतीयहरुका लागि एक विद्रोही आवाज बनेका छन् ।
यस्तो छ कन्हैयाकुमारको पृष्ठभुमि ?
सन् १९८७ मा बिहारको बहुसराय जिल्लामा विपन्न किसान परिवारमा जन्मिएका हुन् कन्हैयाकुमार । उनका बुवा जयशंकर सिंह केही वर्षदेखि प्यारालाइसीसबाट थलिएका छन् । आमा मिनादेवी एउटा बालस्याहार केन्द्रमा काम गर्छिन् । दाजु मणिकान्त एउटा प्राइभेट अफिसका जागिरे हुन् । कन्हैया उपल्लो मानिने भूमिहर जातका व्यक्ति हुन् ।
आफ्नो गाउँ नजिक रहेको मस्नापुरस्थित एक विद्यालयमा कन्हैयाले ६ कक्षासम्म पढेका थिए । त्यसपछि बराउनीमा रहेको आरकेसी स्कुलबाट उनले आफ्नो माध्यमिक शिक्षा पूरा गरे । १० कक्षा पास भएपछि उनले छिमेकी गाउँ मोकामामा रहेको आरआर सिंह कलेजमा विज्ञान संकायमा भर्ना भए । त्यहाँ प्रमाणपत्र तहको अध्ययनपछि स्नातक पढ्न पटना गए । २००७ मा कलेज अफ कमर्सबाट उनले भूगोलमा स्नातकतकोत्तर अध्ययन पूरा गरे ।
अन्तमा उनी पीएचडीका लागि जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटीमा भर्ना भएँ । त्यहाँ अध्ययन गर्ने क्रममा नै उनको जीवनले नयाँ मोड लियो र उनी देशब्यापी चर्चित बने ।
आमाले कन्हैयालाई प्रोफेसर बनाउन चाहन्थिन् । तर, कलेजका दिनहरुमा कन्हैया राजनीतितर्फ आकृष्ट भए । उनी सन् २००२ मा कम्युनिष्ट पार्टी अफ इन्डिया (सीपीआई) को विद्यार्थी संगठन एआईएफसीको सदस्य बनेका थिए । पछि उनी इतिहास बदल्दै जेएनयूको विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष भए । एआईएफसीले जेएनयू स्टुडेन्ट यूनियनमा अध्यक्ष जितेको त्यो पहिलोचोटि थियो ।
चैत २६ गते, २०७५ - ०९:४२ मा प्रकाशित
वाइडबडी : पहिला खरिदमा घोटाला, अहिले किस्ता तिर्न नसकेर सरकारसँग भीख माग्दै !